Kaaliyaha Google wuxuu bilaabmayaa in laga helo Waze | Androidsis
Kaaliyaha Google ayaa laga heli karaa Waze
Inbadan ayaa ah kuwa adeegsada oo caadeystay isticmaalka Waze maalin kasta inay aadaan shaqada, dukaamaysiga, safar ama nooc kasta oo barokac ah oo ay tahay inay ku sameeyaan gudaha iyo dibedda magaalada si loogu wargaliyo markasta oo shil dhaco. wadadaada, daqiiqada ugu dambeysa waxay shaqeysaa marka lagu daro macluumaadka ku saabsan xaalada taraafikada iska ilaali inaad waqtiga ku lumiso safka.
In kasta oo ay tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah ugu muuqdaan ay u fulinayaan howlo badan oo laga heli karo Waze goor dhow ama goor dambe codsigan ay Google iibsatay dhawr sano ka hor wuu baabi'i karaa, wax aad ugu eg siyaasadaha Google sanadihii la soo dhaafay. Si kastaba ha noqotee, hadda, sii wad inaad ku darto astaamo cusub.
Oo anigu waxaan idhaahdaa hadda, tan iyo saacado yar, durba waxaan kula macaamili karnaa Waze iyada oo loo marayo Kaaliyaha Google, inkasta oo xilligan la marayo amarro gaar ah sida "Ok Google, soo sheeg taraafikada" ama "Ok Google, iska ilaali tolidda" si loo beddelo waddada la aasaasay.
Hadda shaqadan cusub waxay ku egtahay Mareykanka boosteejooyinka loo qoondeeyey Ingiriisiga, sidaa darteed waa inaan sugnaa inaan aragno sida tijaabadani u socoto iyo haddii ugu dambayntii ay ku sii faafto dalal badan.
Muxuu noo fidiyaa Waze?
Thanks to Waze waxaan ku gaari karnaa meeshii aan u socono si dhakhso ah maadaama ay noo ogolaaneyso inaan ka fogaanno meelaha ugu badan ee baabuurta. Waxay na ogeysiineysaa waqtiga la qiyaasay ee imaatinka (ETA) oo ku saleysan taraafikada waqtiga-dhabta ah waxayna noo ogolaaneysaa inaan ku keydinno shidaalka anaga oo na siinaya saldhiga gaaska ugu jaban wadada. Waxay ku habboon tahay Android Auto waxayna noo ogolaaneysaa inaan dhageysano muusigga aan jecel nahay ama podcast inta aan isticmaalno arjiga.
Waze - GPS, Maps, Digniinta taraafikada iyo Navigation
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Kaaliyaha Google ayaa laga heli karaa Waze
HTC U19e iyo HTC Desire 19 +: Nooca cusub ee bartamaha
Xiaomi Mi Smartband 4 hadda waa rasmi: Ogow dhammaan faahfaahinta